I-Raw Unifiram enamandla (272786-64-8) Abakhiqizi - Phcoker Chemical
I-Unifiram (DM-232) enamandla kakhulu i-nootropic enamandla kakhulu ye-AMPAkine ene-antiamnesic kanye ne-cognition-enhancing effect ....
SKU: 272786-64-8 Isigaba: I-Smart Drug
I-video ye-Unifiram powder emfushane (272786-64-8)
U-Raw Unifiram ogqamile (272786-64-8) Incazelo
U-Unifiram powder omude, owaziwa nangokuthi i-DM-232, ungumuthi omusha we-nootropic. Isakhiwo salo sifana ne-ampakine, futhi siseduze kakhulu ne-SRaw Unifiram powder. I-Unifiram eyiphuphutheki engumuthi ingenye yezinto ezingcono kakhulu zobuchopho, futhi ine-antiamnesic kanye neminye imiphumela emifundweni yezilwane ngezinga eliphindwe izikhathi eziyinkulungwane ngaphezu kwe-piracetam. I-Unifiram ephuzile i powder iboniswa ukunciphisa isikhathi sokugonywa okubangelwa i-pentobarbital, ngaphandle kokulimaza ukusebenzisana kwemoto. I-Unifiram powder emifushane iyisimo esihle se-AMPA receptor modulator.
I-Unifiram enamandla kakhulu (272786-64-8) Siziqu
Igama Product I-Raw Unifiram enamandla
Igama leKhemikhali DM-232, CHEMBL140717, CTK0J2726, DTXSID00432024, AKOS017975218,2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one;(8aR)-2-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one;Pyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one, 2-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]hexahydro-
I-Drug Class Ama-Nootropics
CAS Inombolo 272786-64-8
I-molecular Fi-ormula C13H15FN2O3S
I-molecular Weziyisishiyagalombili 298.3332032
IMisa ye-Monoisotopic I-298.079 g / mol
Color White Pure
Sukufaneleka I-soluble yamanzi
Sukuhlushwa Tukushisa I-TEMPERATURE YEZINDLELA
I-Raw Unifiram enamandla Aukuphikisana I-Alzheimer Dementia, Ukwelashwa Kwezinkinga Zobunikazi, Ukwelashwa Kwezingcindezi ze-NEUROLOGIC
Unifiram powder (272786-64-8) Inqubo yezenzo?
U-Unifiram uyisimo se-allosteric esihle sama-receptors wakho we-AMPA. Njenge-Ampakine, imiphumela ye-Unifiram igxuma ekutholeni ebuchosheni obangela ukuhanjiswa okungcono kwe-synaptic phakathi kwe-neurons.
I-Unifiram iphinde ikhuthaze ukukhiqizwa kwe-acetylcholine okwenza indlela yayo yesenzo ifane kakhulu noNoopept, Pramiraceta, i-Oxiracetam namanye ama-nootropics e-racetam.
Kube nokucwaninga okuncane ku-Unifiram kunokwakhe okufanayo uSunifiram, kodwa lawa makhemikhali amabili ahlobene kakhulu futhi akholelwa ukuthi asebenza ngezindlela ezingafani.
Izinzuzo of Unifiram powder (272786-64-8)
Njengezinhlanga, u-Unifiram ukholelwa ukuthi uthuthukisa ukufunda, inkumbulo, ukuhlushwa, amandla engqondo nokuqonda okuyisisekelo.
Kunconywe Unifiram powder (272786-64-8) Isilinganiso
Abantu abafuna ukusebenzisa i-unifiram powder kufanele baqale ngamanani amancane ngenkathi behlola imiphumela u-Unifiram anayo emzimbeni wabo osebenzayo. Umthamo ungabuye wanda njengoba umzimba ujwayele ukuwusebenzisa. Ungaqala ku-5 milligrams yesilinganiso nsuku zonke.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo of Unifiram powder (272786-64-8)
Kwezinye izimo, kubikwe izinga lokushaya kwenhliziyo. Lokhu kungabangela ukucindezelwa kwegazi eliphezulu. Uma i-unifiram i-powder isilinganiso semfucuza ephakeme, isizungu nesihlungu singase sibe nakho. Kwezinye izimo, ukuqothulwa nokunyakaza okungavamile kwamathumbu kungabhaliswe. Kuze kube manje, azikho ukuphikisana okuphathelene ne-Unifiram nezinye izithako noma imithi.
I-PRL-8-53 powder emifushane (51352-87-5)
I-PRL-8-53 iyimakhemikhali yophenyo ye-nootropic etholakala ku-benzoic acid ne-phenylmethylamine ngemiphumela yokuvuselela imemori .......
I-Raw Fasoracetam powder (110958-19-5)
I-fasoracetam powder iyinhlangano entsha ye-racetam nootropic entsha futhi ethembisayo eyakhiwa njengendlela yokwelapha i-ADHD engenzeka. ...... ..
Umthamo: 1570kg / inyanga
I-Galantamine Hydrobromide powder yi-inhibitor ye-cholinesterase esetshenziselwe ukuguqula .......
I-Pikamilone i-powder sodium (62936-56-5)
I-Raw Pikamilone i-sodium powder ikhuthaza umsebenzi wobuchopho, ukukhumbuza inkumbulo, ukugxila, ukugqugquzela, ukunakekelwa isikhathi, ......
Umthamo: 1530kg / inyanga